कहिले हुन्छ कक्षा १२ को परीक्षा ? बोर्ड भन्छ- सरकारले निर्णय नगर्दासम्म केही हुँदैन - Khula Patra
प्रकाशित समय: २१:५६:१४
काठमाडौं। कोरोना महामारीको संक्रमण बढेसँगै कक्षा १२ को परीक्षा अन्योलमा परेको छ। विद्यालय तह तथा विश्वविद्यालय तहमा वैकल्पिक विधिमार्फत परीक्षा भइरहेका छन्।
कक्षा १२ को भने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले वार्षिक परीक्षा गर्ने छ। तर, सरकारले निर्णय गरेपछि मात्र परीक्षा गर्ने तयारी बोर्डको छ।
सरकारले कुनै पनि निर्णय गर्न नसक्दा परीक्षा दिन बसेका चार लाख ३२ हजार विद्यार्थी अन्योलमा परेका छन्। कोभिड-१९ का कारण वैशाखमा स्थगित परीक्षा ६ महिना बितिसक्दा पनि सञ्चालन हुन सकेको छैन। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले एक साताअघि आधा दर्जन विकल्पसहितको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पेस गरेको थियो। सो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको छैन।
कोभिड संक्रमण बढ्दै गएको अवस्थामा केन्द्रमा पुगेर परीक्षा दिन सक्ने अवस्था नभएकाले शिक्षा मन्त्रालयको उक्त प्रस्तावबारे मन्त्रिपरिषद् कुनै निर्णयमा पुग्न नसकेको बताइएको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरी शिक्षा मन्त्रालयमार्फत बोर्डलाई परीक्षा लिने बाटो खुला नगरेसम्म परीक्षाबारे कुनै पनि काम अगाडि बढ्ने सम्भावना देखिँदैन। जसका कारण विद्यार्थीहरू अन्योलमा परेका छन्।
एकातिर उनीहरू परीक्षा कहिले हुन्छ भन्ने अन्योलमा छन् भने अर्कोतिर विगतमा पढेको कुरा पनि बिर्सिंदै गएका छन्। जसले गर्दा परीक्षाबारे अकस्मात निर्णय भएको खण्डमा धेरै विद्यार्थी फेल हुने खतरा छ।
शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले १२ कक्षाको परीक्षा लिखित विधिबाटै हुने बताउँदै आएका छन्। बोर्डले भने विभिन्न विकल्पसहित परीक्षाको बाटो खोलिदिन आग्रह गर्दै आएको छ। तर, सरकार कोरोना संक्रमणले निम्त्याएको विशेष परिस्थितिका कारण केन्द्रमा उपस्थित भएर परीक्षा लिन नसक्ने भन्दै पर्ख र हेरको नीतिमा छ।
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष प्रा.डा. चन्द्रमणि पोखरेलले सरकारले परीक्षा सञ्चालनगर्ने निर्णय नगरेसम्म बोर्डले कुनै पनि प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसक्ने बताएका छन्।
तिहारपछि पनि सरकारले निर्णय गरेको खण्डमा सबै प्रक्रिया सुरू गर्दा मंसिरयता परीक्षा हुने सम्भावना नरहेको बोर्ड अध्यक्ष पोखरेलले बताए। कक्षा १२ को परीक्षा नहँुदा विदेश पढ्न जान, विदेशी विश्वविद्यालय अन्तर्गतका कलेजमा भर्ना हुने विद्यार्थीलाई भने समस्यामा पर्नेछ।
बोर्डले ‘ओपन बुक’ विधिबाट परीक्षा सञ्चालन गर्न सुझाव दिएको छ। त्यस्तै कोरोना संक्रमणको जोखिम हेरेर अनलाइन विधि, भर्चुअल विधि लगायतबाट परीक्षा गर्न सुझाव दिएको थियो।
मन्त्रिपरिषद्ले तत्काल निर्णय गर्ने अवस्था नभएपछि यो वर्षको कक्षा १२ को परीक्षा मंसिरमा पनि हुने अवस्था नरहेको अध्यक्ष पोखरेलको भनाइ छ। कात्तिक महिनाभर दसैं, तिहार र छठ पर्ने भएपछि मंसिरमा मात्र प्रक्रिया सुरू हुने उनले बताए।
“मंसिरपछि उच्च हिमाली जिल्ला मनाङ, मुस्ताङ, हुम्ला, डोल्पा, रसुवा र मुगुमा परीक्षा हुन सक्दैन। ती जिल्लाका लागि नयाँ विकल्प खोज्नुपर्छ। अन्य जिल्लामा भने सहज रूपमा गराउन सकिन्छ। तर, हिमाली जिल्लाका विद्यार्थीलाई भने निकै समस्या पर्छ,” अध्यक्ष पोखरेलले भने।
सरकारले दसैं तिहारको बीचमा कुनै निर्णय दिन नसकेको खण्डमा पुस या माघमा मात्र परीक्षा हुने बोर्डका एक सदस्यले बताए। उनका अनुसार दसैं, तिहार र छठ सकिएपछि सरकारले अनुमति दिएको खण्डमा पुस या माघमा परीक्षा गर्न सकिन्छ। नत्र परीक्षा कहिले हुन्छ भन्ने कुरा सरकारको हातमा रहेको ती सदस्यको भनाइ छ।
शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय नआएम्म यसबारे मन्त्रालयले केही भन्न नसक्ने बताएका छन्।
बोर्डले कोरोनाबीच परीक्षा लिन सक्ने स्थिति नभएमा कूल १०० पूर्णाङ्‍कमध्ये ४० नम्बरको अनलाइन परीक्षा, २० नम्बरको प्रयोगात्मक र कक्षा ११ को कूल प्राप्ताङ्‍कलाई बाँकी ४० नम्बरमा गणना गर्ने वा परीक्षा नलिई आन्तरिक मूल्यांकन र कक्षा ११ को प्राप्ताङ्‍कलाई ५०/५० प्रतिशत मानी प्रमाणीकरण गर्नेलगायत विकल्प अघि सारेको छ।
उक्त सुझाव शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमार्फत् मन्त्रिपरिषदमा पुगेको छ। तर, यस विषयमा कुनै निर्णय भएको छैन। दसैँपछि हिमाली जिल्लामा परीक्षा गराउन झन् कठिन हुने अर्को अप्ठ्यारो स्थिति पनि छ। यस्तो स्थितिमा आन्तरिक मूल्यांकन र कक्षा ११ को नजितालाई ५०/५० प्रतिशत मानेर प्रमाणीकरण गराउने विकल्प बलियो हुने जनाइएको छ।
गत वैशाख ८ गतेदेखि तोकिएको सो परीक्षा गत चैत ११ गतेदेखिको बन्दाबन्दीका कारण स्थगन भएको थियो। परीक्षामा कूल चार लाख ३२ हजार विद्यार्थीले आवेदन दिएका थिए। बोर्डले यही भदौ २६ गते सूचना प्रकाशन गरी कक्षा १२ का परीक्षाका लागि आवेदन दिएका विद्यार्थी कोरोना महामारी वा अन्य कारणले अन्य जिल्लामा बसाइँसराइ भएको भए ७ दिनभित्र विवरण मागेको थियो। बोर्डलाई उक्त विवरणसमेत पाइसकेको छ।